नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित असफल प्रेमजोडीहरु
एक समय थियो कलाकारहरू आफ्नो प्रेमको बारेमा सकेसम्म खुलाउन चहान्दैनन् थिए । सम्बन्धको बारेमा खबर बाहिरिए आफ्नो करियर र क्रेज घट्ने सोचाई राखिन्थ्यो । तर पहिलो समय नेपाली चलचित्रमा युवा पुस्ताको आगमनसँगै सोचाईमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ ।
पहिलो फिल्मबाट हिट, दोस्रोबाट गुमनाम आना शर्मा
पहिलो चलचित्र ‘जेरी’मा अनमोल केसीको अपोजिटमा देखिएकी थिइन् नायिका आना शर्मा । पहिलो चलचित्र सफल भएसँगै उनको लुक्स र अभिनयलाई दर्शकले रुचाए । युवा पुस्ता माझ एकाएक चर्चामा आइन् आना ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आस गरेकी नायिका हुन् साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाह । पहिलो चलचित्र ‘ड्रिम्स’ हिट दिएसँगै करिब दुई वर्ष पछि साम्राज्ञी अभिनित ‘ए मेरो हजुर २’ रिलिज भएको थियो ।
'रानी'ले दिएन राहत मलिना र अनुपलाई, के होला फिल्मी करियर?
आधा दर्जन बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी नायिका मलिना जोशीको आसको साथै करियरको भर भनेको चलचित्र थियो ‘रानी’ । प्राय कुनै पनि चलचित्रको प्रमोसनमा नदेखिने मलिना ‘रानी’को प्रेमोसनमा भने सक्ने जति दौडिएकी थिइन् । तर बाँकी अरू चलचित्र जस्तै रानीले पनि मलिनाको फिल्मी करियरलाई उकास्न सकेन ।
हिरो खोज्दैमा हैरान ऋषी धमला पत्नी, अब गर्दैछिन् यी नायकसँग रोमान्स
चलचित्रको औपचारिक घोषणा हुनु अगावै ऋषि धमला पत्नीले निर्माण तथा अभिनय गर्ने लागेको चलचित्र ‘अनुराग’को चर्चा सुरु भएकाे थियाे। यतिबेला चलचित्र फ्लाेरमा जानु अघि नै नायककाे कारण चर्चामा अाइरहेकाे छ । केही समय अघि काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि चलचित्र अनुरागको टिमसँगै औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएकाे
सिनेपाटी 2074, कार्तिक 5, आईतबार |
केकीले बनाउने ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा काे-काे छन् कलाकार ?
अभिनयमा अब्बल मानिने अभिनेत्री केकी अधिकारीले चलचित्र निर्माण गर्ने भएकी छिन् । हाल प्रि–प्रोडक्सनको काम भइरहेको चलचित्रको नाम भने ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ रहेको छ । म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीले चलचित्रलाई निर्देशन गर्ने भएका छन् । चलचित्रमा शान बस्न्यातको कथा रहने छ ।
सिनेपाटी 2074, कार्तिक 1, बुधबार |
छविराज ओझा ब्यानरबाट डेव्यु गरेका अभिनेत्रीहरु हुन् –रेखा थापा र शिल्पा पोखरेल । रेखा र छविराजको सम्बन्ध बिछेद भएसँगै छवि शिल्पासँग नजिकिएका थिए । समय समयमा छवि र शिल्पाको विवाहको खबरले मिडिया ताति रहेको हुन्छ । प्राय जसो छवि र शिल्पा कुनै पनि कार्यक्रममा पुग्दा एकसाथ नै हुन्छन् ।
सिनेपाटी 2074, अश्विन 31, मंगलबार |
थाइल्याण्डमा प्रदिपको क्रेज
चलचित्र ‘प्रेमगीत’ र ‘प्रेमगीत २’ बाट एकाएक चर्चामा आएका नायक हुन प्रदिप खड्का । लगातार दुई चलचित्र हिट दिएसँगै उनको फ्यान फलोइङ लोभ लाग्दो छ । हालै उनी अभिनित ‘प्रेमगीत २’ प्रदर्शन भएसगै उनको क्रेजको प्रमाणित गरिसकेको छ ।
ऋषि धमला पत्नीले बनाउने फिल्म ‘अनुराग’बाट आउट पल शाह
पछिल्लो समय सिनेवृतमा चर्चित नाम हो पल शाह । केही दिन अघि पल शाहले नयाँ चलचित्र ‘अनुराग’ साइन् गरेको खबर बाहिरिएको थियो । जसलाई संचारकर्मी ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले निर्माण गर्ने लागेकी थिइन् । तर यति बेला बुझिए अुनसार पलले उक्त चलचित्रबाट हात झिकेका छन् ।
सिनेपाटी 2074, अश्विन 27, शुक्रबार |
‘रानी’को साथ छोडेर अमेरिकामा मलिना
पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशी अभिनित चलचित्र ‘रानी’ यही कात्र्तिक २ गतेबाट प्रदर्शनमा आउदैँ छ । चलचित्र प्रदर्शनको नजिक आइरहन्दा चलचित्रकी मुख्य नायिका भने अमेरिका पुगेकी छिन् ।
सिनेपाटी 2074, अश्विन 26, विहिबार |